Ikhawunta ye-footfall yokuxhumeka kwe-WIFI
Umakhalekhukhwini we-Andriod noma we-IOS ungasetshenziselwa ukusetha
Ukusebenza kahle endaweni emnyama
Xhuma futhi Udlale
Iphrothokholi ne-API inikeziwe
Ifanele i-Chain Stores
Abaningi bethu counterfall counteryimikhiqizo enelungelo lobunikazi. Ukuze sigweme ukukopela, asizange sibeke okuqukethwe okuningi kuwebhusayithi. Ungathintana nabasebenzi bethu bokuthengisa ukuze bakuthumelele imininingwane enemininingwane mayelana nenkampani yethu counterfall counter.
Sisebenzisa lokhu counterfall counterinzwa yokuhlinzeka ngesixazululo esisebenza ngokushesha, esilula nesisebenzayo sokubala izinyawo kumamitapo wolwazi amaningi, amamnyuziyamu, izindawo ezibukekayo, izitolo eziwuchungechunge, izitolo ezinkulu, nezinye izindawo ekhaya naphesheya. Lokhucounterfall counter ingasetshenziselwa nokulawula ukuhlala okuzenzakalelayo.
I-HPC015S counterfall counter iyikhawunta yokugeleza komgibeli, encane kakhulu, esebenza ngebhethri, edluliselwa nge-WIFI. Isethi eyodwa kuphela yezinto zokusebenza engahlangabezana nezidingo zekhasimende. Isikrini sicacile futhi sibuyekezwa ngesikhathi sangempela. Azikho ezinye izindleko ezidingekayo. Ungakhetha imodi yenethiwekhi noma imodi yokuma wedwa.
Lapho i umshini wokubala izinyawo isebenzisa imodi yenethiwekhi, i counterfall counterinikeza i-hotspot yenethiwekhi ye-WIFI-AP kanye nesevisi ye-WEB eyakhelwe ngaphakathi. Ngemva kokuxhuma nokungena ngemvume nganoma iyiphi i-smart phone (i-Android, i-IOS), sebenzisa ikhasi LEWEBHU ukuze usethe imingcele yendawo yokubala ukugeleza kwabagibeli Noma upheqa idatha, iseva ifinyeza futhi inikeze imibiko ehlukahlukene yokuhlaziya, ixhunywe ngamasistimu ezinkampani zangaphandle. noma izandiso zokusebenza.
Inzwa ye-Footfall ingagcina irekhodi lokugeleza kwabagibeli ngokwesikhathi esimisiwe, futhi ilayishe irekhodi lokugeleza komgibeli kuseva eqokiwe njalo ngokuya kwesikhathi esinqunyiwe.
Ikhawunta yezinyawo futhi inikeza ukwesekwa okuphelele kwezobuchwepheshe ukusiza ekuthuthukisweni kwesibili, izingcingo zesixhumi esibonakalayo se-API nokuthuthukiswa kwesibili, ukuhlinzeka okuphelele umshini wokubala izinyawoiphrothokholi yezokuxhumana kanye nokwesekwa kwezobuchwepheshe okuhlobene, kanye nezinhlobonhlobo zezindlela zokudokha idatha. Inkundla isebenzisa amaseva angochwepheshe ukuze inikeze izinhlelo zokusebenza ezibushelelezi nezinethezekile Isipiliyoni, iseva eyisipele yedatha ezimele ukuze kuqinisekiswe ubuqotho bedatha.
Umbala Okumnyama noma okumhlophe
Ukuxhumana Wireless, Wifi module ukwesekwa
Ububanzi bokubona 1-20 amamitha
Ibhethri kufika eminyakeni engu-1.5 (ibhethri elisezingeni lamazwe ngamazwe)
Indlela Yokuhlola Idatha Iselula noma i-PC
Kungani ukhetha ikhawunta ye-MRB footfall?
1. Ngokwezinguquko kudatha yokugeleza kwabagibeli ebalwe yi- counterfall counter, izindawo ezikhethekile nezikhathi ezikhethekile zingahlulelwa, futhi ukuphathwa kwezakhiwo, ukugcinwa nokugcinwa kokuphepha kungahlelwa ngempumelelo ukuze kugwenywe ukulahlekelwa kwempahla ngokungadingekile.
2. Ukugeleza komgibeli endaweni enkulu ebalwa ngu finzwa ye-ootfall inikeza isisekelo sesayensi sesakhiwo esihlanganisiwe sendawo yonke.
3. Ngezibalo nokuqhathanisa ukuhamba kwabagibeli ezikhathini ezihlukene, hlaziya ngokwesayensi ubuhlakani besu lokusebenza lokumaketha lokuphromotha.
4. Ngokuhlaziya idatha ku counterfall counter, nquma kahle izinga lentengo lokuqashwa kwesitolo sekhawunta.
5. Ngokwenani labagibeli abavaleleke endaweni, izinsiza zamandla abantu zingalungiswa ngendlela efanele ukuze kulawulwe izindleko.
6. Nikeza ngesisekelo sesayensi sokuthuthukisa ibhajethi yokukhangisa nokuphromotha ngezibalo zokugeleza kwabagibeli.
7. Ngokusebenzisa inzwa yokuwa kwezinyawo, amandla okusebenzisa amaphakathi okugeleza komgibeli angabalwa ukuze anikeze ireferensi yokuma komkhiqizo.
8.Nge umshini wokubala izinyawo, amahora ebhizinisi angasethwa ngokunengqondo futhi ukulahlekelwa kwezindleko kungancishiswa.
Isebenza kanjani ikhawunta ye-footfall?
Umgomo wokubala: ubuchwepheshe bokuhlukanisa, imisebe ye-infrared.
Indlela yokulayisha idatha: ukulayishwa kwedatha kuseva yamafu nge-WIFI engenantambo.
Isibonisi sedatha: Isikrini esikhulu se-OLED sibonisa isibonisi sesikhathi sangempela sedatha yokungena nokuphuma kosuku.
Ukutholwa ububanzi: endlini 1-20 amamitha, ngaphandle 1-16 amamitha.
Indlela yokubala: inombolo yokugeleza kwabagibeli abaphumayo nabangenayo ingabalwa ngokwehlukana.
Indlela yokubuka idatha: faka i-URL kumakhalekhukhwini noma i-PC ukuze ufake ikhasi lewebhu, ngena egameni le-akhawunti nephasiwedi ukuze ubuke, futhi ungakwazi ukufinyelela idatha yezikhathi ezihlukahlukene zokubuka.
Indlela yokufaka: lungisa isidlulisi se-infrared kanye nesamukeli se-infrared endaweni yobude obufanayo kuzo zombili izinhlangothi zesiteshi, ugweme izithiyo phakathi, futhi ukuphakama kokufaka kuphakathi kwamamitha angu-1.2-1.4.
Imodi yokunikeza amandla: Ukunikezwa kwamandla kwe-USD, amandla ebhethri e-lithium ashajwayo (angasetshenziswa cishe izinyanga ezi-3 ngemva kokushajwa).
Idatha yedivayisi yezitolo ezihlukene ingabukwa ku-akhawunti efanayo, iphathwe ngesikhathi esifanayo, futhi ukuqhathanisa idatha kungenziwa.
Ukulawula ukuhlala kungasethwa yi- counterfall counter isofthiwe.
HPC015S Footfall counter ividiyo
Sinezinhlobo eziningi ze-IR counterfall counter, 2D, 3D, AI counterfall counter, kuhlale kukhona okuzofanelana nawe, sicela usithinte, sizoncoma ezifanele kakhulu counterfall counter ngawe emahoreni angama-24.
Okwedlule: Umshini wokubala womuntu we-MRB USB wezitolo ze-HPC015U
Olandelayo: I-MRB wireless digital people counter HPC005U
Ikhamera yokubala izinyawo
I-Footfall Counting System
footfall abantu counter
footfall abantu ukubala ikhamera
ikhawunta ye-wifi footfall
I-MRB wireless digital people counter HPC005U